လေလံပွဲများ - Sotheby's Hong Kong | HIGH ရတနာအိပ်မက်
မတ်လ 30, 2015
Sotheby ၏အံ့ဖွယ်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် Jadeite Spring Sale သည်လာမည့်nextပြီ ၆ ရက်တွင်ဟောင်ကောင်၌ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးထိုတွင်ထူးခြားသောအရောင်အသွေးစုံလင်သည့်စိန်များ၊ ကျော်ကြားသောရတနာသူများ၏စပျစ်သီးနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်းများ၊
ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစုစုပေါင်းစာရေးတံ ၃၂၀ ခန့်၊ ဒေါ်လာ ၉၉ သန်းပိုလျှံသည်။ စိန်သည်Aprilပြီလ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါမူကားလေလံတင်ရောင်းချသူများအားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်နှင့်သေချာပေါက်ကောင်းကင်အမြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းများကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုသောဤအမှန်တကယ်ထူးခြားသောစိန်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးအံ့ one စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ၇၇.၇၇ ကာရက်ရှိဖန်ပြောင်သောအဝါရောင်စိန်လက်စွပ်နှင့်ဒုတိယမှာထိပ်တန်း ၂၃.၁၅ ကာရက်ရှိ DIF အမျိုးအစား IIa Golconda စိန်လက်စွပ်ဖြစ်သည် “ Golconda ၏ဒဏ္ ”ာရီ”.
အဆိုပါ ကမ္ဘာ့လေလံစံချိန်တင် အဝါရောင်စိန်များကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Sotheby's Geneva တွင်နှစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ခြင်း၊“ နေ -Drop စိန်” (The Lady Dalal) ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၁၁၀.၀၃ ကာရက်ရှိသစ်တော်သီးပုံသဏ္vာန်အဝါရောင်စိန်ပွင့်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂,၃၆၁,၅၅၈ - လေလံတင်ရောင်းချခြင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောစိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်:
၎င်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရှားပါးသည့်အချိန်ကာလများတွင်ထပ်မံသတ်မှတ်ခဲ့သည် Graff ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအဝါရောင် အလေးချိန် ၁.၀.၀၉ ကာရက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆,၃၄၇,၇၉၉ အတွက်နိုဝင်ဘာလတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊
ဒီဖန်စီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအဝါရောင်စိန်လက်စွပ်သည် ၇၇.၇၇ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောကူရှူပုံသဏ္fာန်အဝါရောင်စိန်ကိုဗဟိုပြုသည်။ ၅.၀၀ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောနှလုံးပုံသဏ္shapedာန်ရှိသောစိန်နှစ်ခုနှင့်အတူအဖြူရောင် ၁၈ ကာရက်ရှိတပ်ဆင်ထားသည့်တောက်ပသောစိန်ရွက်အထိ ရွှေဝါရောင် - လက်စွပ်ကိုဆွဲ။ တပ်ဆင်။ ဆွဲကြိုးတပ်နိုင်သည်။
သိလိုစိတ်ကိုသတိပြုပါ။ ခုနစ်ခုသည်တရုတ်လူမျိုးများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနံပါတ်တစ်ဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤထူးခြားသောအရွယ်အစားသည်မည်သည့်စိန်အတွက်မဆိုအလွန်ရှားပါးပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်သောအဝါရောင်အရောင်သည်ထိုကျောက်တုံးများကြားတွင်ဤစိန်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည်။
အဖြစ်လူသိများစိန်သည် “ The Golconda စိန်”၎င်းသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်၊
ဥရောပ၏စိန်များကိုစိတ် ၀ င်စားသည်မှာ ၁၇ ရာစုအစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့ပြီး Jean-Baptiste Tavernier သည် ၁၆၄၀ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယ၏ Golconda သတ္တုတွင်းများသို့ပထမဆုံးလည်ပတ်ခဲ့သူများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ဘုရင်လူးဝစ် XIV ပင်၊ le ရွယ် SoleilTavernier တင်ပြသောကျောက်များမယုံနိုင်လောက်အောင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာလှပမှုကိုဂုဏ်ပြုနေစဉ်စိန်များသည်“ ကြည်လင်သောရေကန်များ” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အမှန်စင်စစ် Golconda စိန်များသည်အခြား II များနှင့်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းတို့သည် Type IIa စိန်များဖြစ်သောကြောင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကင်းပြီးဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသန့်ရှင်းသောကြောင့်အလွန်ထူးခြားသည်။
The Legend of Golconda သည် ၂၃.၁၅ ကာရက်ရှိ D-color အတွင်းပိုင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိသော IIa စိန်လက်စွပ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၃ - ၅ သန်း) သည် Golconda ၏အရည်အသွေးများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ စိန်၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်နှင့်လှပမှုကိုပေးသည့်၎င်း၏ရှေးဟောင်းဖြတ်တောက်မှုသည်တောက်ပမှုနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုဟန်ချက်ကိုပြသသည်။ ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံဆောင်ခဲတည်ဆောက်ပုံက၎င်းကိုသမိုင်းတွင်ထူးခြားသောစိန်များဖြစ်သော Koh-i-Noor နှင့် The Regent တို့တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
အဆိုပါ Regent စိန်
ဖန်စီရောင်စုံစိန်များကြားတွင်ရှားပါးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်စိန် အလွန်တရာလိုချင်ကြပြီးသူတို့၏ဝယ်လိုအားကစျေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ လေလံ၏သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ပန်းရောင်စိန်ရှစ်လုံးစုစုပေါင်းကာရက်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်ဟုဆိုရန်လုံလောက်သည်။
နောက်ဆုံးဥပမာမှာပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ Sotheby's Hong Kong တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇.၇၇ သန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့သောထိပ်တန်း ၈.၄၁ ကာရက်ရှိခရမ်းရောင် - ပန်းရောင်စိန်တောက်ပသောပန်းရောင်စိန်ပွင့်ကိုယနေ့တိုင်အောင်လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ ၄.၅၇ ကာရက်အတွင်း၌ချောမောလှပသော Fancy Vivid ပန်းရောင်စိန်နှင့်စိန် လက်စွပ် Carvin ပြင်သစ်တို့ကတပ်ဆင်ထားသည် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ မှ ၇ သန်း) သည်ပန်းရောင်စိန်များအနက်အကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ Fancy Vivid” သည် GIA မှအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်စိန်များအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ Sotheby ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ -
နှလုံးသားပုံသဏ္stoneာန်ဖြစ်သောကျောက်သည်နီယွန်ပန်းရောင်နှင့်တူသောအရောင်တောက်ပမှုနှင့်အရောင်တောက်ပမှုကိုဖော်ပြသည်။ ပန်းရောင်စိန်များတွင်တွေ့ရခဲသော Internal Stawless ရှင်းလင်းမှုနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဤကျောက်တုံးသည်ပန်းရောင်စိန်တွင်အကောင်းဆုံးအရောင်များ၊ ပြည့်နှက်ခြင်းနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်းကိုပြသပြီးသဘာ ၀ ၏အံ့ဖွယ်ရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
Carvin French လက်စွပ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်မှာ၊ ရှားပါး။ လက်ရာမြောက်သော ၄.၀၁ ကာရက်တွဲ Fancy Intense Purple-Pink Diamond, ၃.၇၂ ကာရက် Fancy Intense Purplish-Pink Diamond နှင့် Diamond Pendent Earrings (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆-၇ သန်း)
၄ င်းတို့၏ရှားပါးမှုကြောင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ အတွဲလိုက်လေလံတင်ရောင်းချသည့်အရောင်၊ အရွယ်အစားနှင့်ဖြတ်တောက်သောဖန်စီပြင်းထန်သောပန်းရောင်စိန်နှစ်လုံးကိုစုစည်းရန်မှာအတော်အတန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနားကပ်နှစ်မျိုးသည်ကျောက်မျက်ရတနာများအပြင်ထူးခြားသည့်ဖြည့်စွက်ချက်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ စုဆောင်းမှု။
လာမည့် Sotheby's Hong Kong ရှိ Spring Sale တွင်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည် ကျော်ကြားသောရတနာတို့ကစပျစ်သီးနှင့်ခေတ်ပြိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အပိုင်းပိုင်းBulgari နှင့် Boucheron အပါအ ၀ င် အဖြစ်ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာများအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော Marina ခနှင့် Tamsen Z. အဖြစ်
ဒီခမ်းနား Bulgari မှစိန်လည်ဆွဲ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁-၁.၂ သန်း) သည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များခန့်တွင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သော furled ဖဲကြိုးများကိုသုံးဖက်မြင်ဒီဇိုင်းထွင်သည်။
၇.၀၀ ကာရက်ရှိသစ်တော်သီးပုံ DIF စိန်အပါအ ၀ င်ကျောက်တုံးကြီးများဖြင့်ပုဒ်ဖြတ်ထားသောဤလည်ဆွဲသည် Art Deco ၏လွှမ်းမိုးမှုအားထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ မကြုံစဖူးသောသပ်ရပ်သောလိုင်းများကိုပြသသည်။
ပစ္စုပ္ပန် ၇.၈၀ နှင့် ၇.၁၀ ကာရက်ရှိဘိုဂရီရီယိုမသန်စွမ်းသောမြန်မာမိုးကုတ် Ruby နှင့် Diamond Pendent Earrings တို့ဖြစ်သည် (Est ။ US $ ၄.၅-၅ သန်း) သည်အီတလီမာစတာ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအနုပညာနှင့် Bulgari ၏ထူးကဲသောသံလိုက်နှင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောစတိုင်တစ်ခု၏အကောင်းဆုံးအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Marina Bulgariဘူဂေးရီးယားမင်းဆက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Sotirio Bulgari ၏မြေးသည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အရောင်အားပိတ်ဆို့ထားသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်တောက်ပသည့်စိန်များမှထွင်းထုထားသောဂရိနှင့်အီတလီမှုတ်သွင်းထားသောဒီဇိုင်းများတွင်ဒဏ္myာရီမှအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည်။ သဘာဝကမ္ဘာ၊ အရာဝတ္ထုနှင့်ဗိသုကာပညာ။
၏ပစ္စုပ္ပန်တစ်စုံ Unheated Kashmir Sapphire နှင့် Diamond Pendent Earrings, Marina B. (အက်စ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅၀,၀၀၀ မှ ၇၄၀,၀၀၀) ကိုစုစုပေါင်း ၃၈.၅၆ ကာရက်ရှိဒဏ္abledာရီဆန်သောကက်မရစ်သတ္တုတွင်းမှအရောင်နှင့်အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီသည့်နီလာ ၁၈ ခုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းကိုအကြီးမြတ်ဆုံးတိကျမှုနှင့်ပုံစံနှင့်အချိုးအစားဖြင့်ဖော်ပြသော geometric surmount မှဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ရှားပါးခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ဤပေါင်းစပ်မှုက၎င်းအားအချိန်ကာလမကြာလှသောအချုပ်အခြာအာဏာကိုရှာဖွေစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏အချစ်ဆုံးနှင့်ကျော်ကြားသော sopranos တစ်ခုဖြစ်သောRenée Fleming သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားအနုပညာဆုတံဆိပ်များနှင့်အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်အသံဆုအတွက်ဂရမ်မီဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
သူမ၏ပြီးပြည့်စုံသောအနုပညာ၊ Ann Ziff မှကျောက်မျက်ရတနာနှင့်စိန်“ Renée Fleming Iris” Brooch၊ Tamsen Z (အက်။ အက်စ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀,၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀) သူမ၏ခေတ်မီမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်သူမ၏ရဲရင့်သောအရောင်များကိုလူသိများသည်။ Hybridiser Heather Pryor မှဖန်တီးပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်Renée Fleming အမည်ရှိအမည်ရှိ Iris ၏ချစ်စရာကောင်းသည့်ပန်းပွင့်ပြီးနောက်ဤထူးခြားသည့်ဘရိုရှာကိုပုံစံပြုသည်။
ဒါ့အပြင်မှတ်သားဖွယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Boucheron မှ ၆၅.၃၃ ကာရက်ရှိကိုလံဘီယာမြနှင့်စိန်လည်ဆွဲ၊ (Est ။ US $ 320,000-410,000) ။
မြန်မာပတ္တမြားများအနက်မှထင်ရှားသောမိုးကုတ်ချိုင့်မှပတ္တမြားများတွင်တွေ့ရသော“ Pigeon's Blood” အမည်ရှိအနီရောင်အရောင်ကိုအမြင့်ဆုံးဟုသတ်မှတ်သည်။
သဘာဝအပူမရသည့်မြန်မာပတ္တမြားများသည် ပို၍ ရှားပါးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အရေးကြီးသည် မပူရသေးသောမြန်မာ့ပဲခူးသွေး၏ပတ္တမြားနှင့်စိန်လည်ဆွဲနှင့်ကိုက်ညီသည့်နားကပ်များ၊ Faidee ပတ္တမြားစုစုပေါင်း ၁၂၄.၈ ကာရက်နှင့်စိန်ပေါင်း ၅၉.၂၅ ကာရတ်ရှိသည့်အနက် (ပျှမ်းမျှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၆-၃၀ သန်း) သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျောက်မျက်တိုင်းကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ချောခြင်းနှင့်၎င်းလည်ပတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ပတ္တမြားတစ်ခုစီတိုင်းသည်၎င်း၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောလေကိုရရှိသောသတ္တုတောင်ကိုဖုံးကွယ်ထားရန်လိမ္မာပါးနပ်စွာသတ်မှတ်ထားသည်။ ကောင်းမွန်စွာကိုက်ညီသောမြန်မာမပူသည့်ပတ္တမြားများကိုစုဆောင်းရန်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအရည်အသွေးမြင့်ပတ္တမြားများဖန်တီးရန်စိတ်ကူးသည်လက်တွေ့မမြင်နိုင်ပါ။ အရှားပါးဆုံးအကြားအရှားပါးဆုံး။
အဆိုပါပတ္တမြား suite ကိုဖြည့်စွက်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် 10.02 carat ကိုလံဘီယာရေနံမြနှင့်စိန်လက်စွပ်မရှိပါ (Est ။ US $ 590,000-700,000) အံ့သြဖွယ်အချိုးအစား -
ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းမှလုံး ၀ ကင်းလွတ်ပြီးကိုလံဘီယာမြ၏သဘာဝအလှအပသည်တောက်ပနေသောစိန်များနှင့်မျက်နှာပြင်၏ပုံစံဒီဇိုင်းများကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည်။
အဆိုပါ timeless ကြော့ရှင်းခြင်းနှင့်ချစ်စရာကောင်းခေတ်မီ၏ သဘာဝပုလဲ သူတို့ရဲ့သက်သက်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သော form မှာသူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုရှာပါ။ ပုလဲတစ်ခုတည်းရရန်သဘာဝတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မာကောင် ၁၀,၀၀၀ ခန့်ကြာပြီးထိုရတနာများ၏အနည်းစုသာလျှင်ရတနာများတွင်အသုံးပြုရန်နှစ်သက်ဖွယ်အရည်အသွေးရှိလိမ့်မည်။
ကိုက်ညီသောအရောင်များ၊ ပုံသဏ္mmာန်များနှင့်မှန်ကဲ့သို့တောက်ပသော ၁၄.၁၀ မှ ၆.၂၀mm အရွယ်ရှိပုလဲ ၁၃၇ ပုလဲနှင့်တွဲထားသည်။ Triple Strand Natural ပုလဲနှင့် Sapphire လည်ဆွဲ (ခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၃-၃.၈ သန်း) သည်အလွန်ခက်ခဲသောစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ကသိမ်မွေ့သာလွန်ထူးကဲများနှင့်အစွန်းရောက်ရှားပါး၏စစ်မှန်တဲ့ဘဏ္treာကိုသံသယဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတစ် ဦး ဖြင့်ပြည့်စုံသည် သဘာဝရေငန်ပုလဲနှင့်စိန် Pendent နားကပ် (Est ။ US $ 500,000 - 600,000) ထပ်တူထပ်မျှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလှပသောကြော့ရှင်းမှု။
ဝယ်လိုအားတိုး။ ၀ ယ်လိုအားတိုးပွားလာခြင်း၊ သဘာဝကျောက်စိမ်း မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျောက်မျက်ရတနာများလေလံပွဲတွင်ထူးခြားသောရလဒ်များရရှိခဲ့သည်။
၂ ဝ ၁၄ ခုနှစ်တွင်ကျော်ကြားသော Hutton-Mdivani လည်ဆွဲအား Cartier Collection မှဝယ်ယူလိုက်ခြင်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၄၇ သန်းရရှိခဲ့သည်။ ရီပတ်ဘလီကန်ကာလမှကျောက်စိမ်းကျောက်မျက်ရတနာ ၂ ခုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၄၇ သန်းရရှိခဲ့သည်။ မည်သည့်ကျောက်စိမ်းရတနာနှင့် Cartier ရတနာအတွက်မဆို။
ဘာဘရာ Hutton Cartier ကျောက်စိမ်းလည်ဆွဲ။
ဒီ Spring Sotheby's က J ကိုတင်ဆက်ရတာအရမ်းပျော်တယ်ပုတီးနှင့်စိန်လည်ဆွဲ adeite ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၁.၀၇ မှ ၉.၃၂ မီလီမီတာရှိသောကျောက်စိမ်း ၆၇ ခု (ခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈-၇ သန်း) ။
ဒါ့အပြင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကျောက်စိမ်းနှင့်စိန်လည်ဆွဲ (ခန့်မှန်းခြေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ မှ ၂.၂၅ သန်း) ကိုဂန္ထဝင် cabochon ပုံစံဖြင့်“ laokeng” ကျောက်စိမ်း ၁၈ ခုနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်များနှင့်လှပသောကြည်လင်ပြတ်သားမှုများကိုစိန်များဖြင့်ခြယ်သထားသည်။
ကျောက်စိမ်းရတနာ၏အပြောင်မြောက်ဆုံးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သောချောမွေ့ပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည့်ကျောက်မျက်ရတနာများကြောင့်ကျောက်စိမ်းတွင်းမှအကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသူများကိုလည်း ၀ မ်းမြောက်စေမည်။
အသီးသီးသောခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၆.၆၈ နှင့် ၁၂.၁၅ မီလီမီတာရှိသောအချင်းနှင့်အထူဖြစ်သည် ကျောက်စိမ်း (Est ။ US $ ၂.၈-၃.၃ သန်း) တွင်တောက်ပပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတောက်ပသောအစိမ်းရောင်တောက်ပမှုရှိသည်။
နောက်ထပ်မီးမောင်းထိုးပြaက ကျောက်စိမ်း“ ခရမ်းချဉ်”၊ အဝါရောင်စိန်နှင့်စိန်ဆွဲကြိုး (ခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၅၀,၀၀၀ မှ ၁.၁ သန်း) ထူးခြားသောဘာသာပြန်မှု။
၁၀ မီလီမီတာကျော်သောအထင်ကြီးဖွယ်အထူရှိသောထိုကဲ့သို့သောကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုသဘာဝနှင့်သဘာဝနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းတို့တွင်ထူးချွန်သောလက်မှုပညာဖြင့်ရရှိသောတကယ့်အံ့ဖွယ်အမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တက်ကြွမြူးစိမ်းလန်းသောအရောင်နှင့်ပေါင်းပြီး၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုသည်ကျောက်စိမ်းပညာရှင်များ၏မျက်စိကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်!
နှုတ်ဆက်ရန်ပြောရလျှင်ဒီမှာသေးငယ်သည် အပိုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထူးများ၏ပြခန်း ဒီအံ့ဖွယ်ရတနာနှင့်ကျောက်စိမ်းနွေရာသီရောင်းမှ:
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ ၏ပစ္စည်းယဉ်ကျေး Sotheby ရဲ့ စာနယ်ဇင်းရုံး။
Tags:boucheron • Cartier • ဟောင်ကောင် • ကျောက်စိမ်း • ခမ်းနားရတနာ • marina ခ။ • ပုလဲ • ပတ္တမြား • Sotheby ရဲ့ • နွေဦးရောင်းမည် • ဗန် Cleef & Arpels
မှတ်ချက်3ခုလေလံ - Sotheby's Hong Kong မှရတနာရတနာများနှင့်ကျောက်စိမ်းနွေရာသီရောင်းချခြင်း"
Pingback: လေလံ - Sotheby's New York မှာရတနာရတနာများ အချိန်မှတဆင့်ရတနာ
ဟိုင်း၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်က browser လိုက်ဖက်မှုရှိမယ်ထင်တယ်
ပြနာများ။ သင်၏ Opera ရှိသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းနေသော်လည်း Internet Explorer တွင်ဖွင့်သောအခါ၊
သင်၏ကြင်နာသောစကားများနှင့် HJD ကိုလိုက်နာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါသိသလောက်ဆိုရလျှင် website ပြသခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် IE သည်အမြဲတမ်း“ ခက်ခဲသည်” …ဒါပေမယ့်အကြီးအကဲများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။